Tsvaga 6 masiki evhudzi echirimo ichi | Bezzia
Susana Garcia | 29/04/2021 20:00 | Runako, Runako kurapwa
El kuchengetedza bvudzi chinhu chakakosha kuti tinofanira kufunga zuva nezuva. Iwe unogara uchifanira kushandisa zvigadzirwa zvakanaka asi isu tinogona zvakare kushandisa makuru evhudzi masiki nguva nenguva, nekuti nenzira iyoyo isu tinowedzera kumwe kuwedzera kutarisirwa kune redu bvudzi. Ichi chitubu tinogona kuve nehydrated uye yakanaka, inopenya uye ine hutano bvudzi kana tikashandisa masiki akakwana kune bvudzi redu.
ari bvudzi masiki rinozoita kuti bvudzi rako riwedzere uye nekusarudza izvo zvinosanganisa Isu tinokwanisa nekudaro titarise izvo zvakakodzerana nemhando yebvudzi redu. Masiki echisikigo atinogona kugadzira kumba akanaka, nekuti isu tinoshandisa zvigadzirwa zvakasikwa uye panguva imwechete tinochengeta vhudzi nezvinhu zvakapusa.
1 Frizzy bvudzi masiki
2 Bvudzi chifukidzo chebvudzi rakaoma
3 Oiri bvudzi mask
4 Mask yebvudzi rakanaka
5 Bvudzi bvudzi mask
6 Mask yevhudzi rine mavara
Frizzy bvudzi masiki
El bvudzi rinotonhora kazhinji rine dambudziko rekuoma, saka chinhu chikuru mune ino kesi kusimbisa bvudzi. Avocado inowanzova chinhu chikuru cheiyi kesi. Saka tinofanirwa kutsvaga avocado yakaibva yatinogona kupusha kuti tishandise pabvudzi. Iyi avocado inogona kusanganiswa nemafuta emuorivhi kana maamondi ayo ari kunyorovesa kubvisa frizz. Mushure mekuisa maski isu tinofanirwa kusuka bvudzi neshampoo yakanaka asi isu tichaona kuti iyo frizz inonyangarika sei kana yakanyatsosvinwa.
Bvudzi chifukidzo chebvudzi rakaoma
Bvudzi rakaoma rinogona zvakare kuva kubatsirwa nezvinhu zvinopa hydration yakakura. Mafuta akasanganiswa ekokonati uye jena jena zvakanaka. Mafuta ekokonati anonyorova uye zai jena rakareruka asi zvinobatsira kuchengetedza bvudzi rakanyorova, kuitira kuti pakupedzisira bvudzi riwane chikafu uye rirege kuoma.
Oiri bvudzi mask
Masiki ekuzvigadzirira ekugadzira bvudzi rine mafuta kazhinji gara uchishandisa muto wemandimu, sezvo iine simba rakakwirira rekushatisa. Unogona kusanganisa ndimu nezai chena, chinova chigadzirwa chemwenje chinowedzera kupenya. Mune vhudzi rine mafuta hatigone kushandisa zvinopa mafuta zvakadai semafuta emuorivhi, asi zvinogona zvakare kusanganiswa neyoga iyo inoyerera asi isina mafuta. Gadzira mask uye uende kwehafu yeawa. Bvudzi rinofanira kubva ragezwa nguva dzose. Lemon inobatsira kudzora kugadzirwa kwemafuta nyore.
Mask yebvudzi rakanaka
ari sitirobheri chinhu chakakwana chebvudzi risina simba. Masiki ebvudzi rakanaka anofanira kupa simba uye huwandu. Shandisa mastrawberry anogona kupwanywa kuita bota ratinoisa chibage. Strawberries inowedzera simba kune vhudzi uye upfu hunowedzera vhoriyamu.
Bvudzi bvudzi mask
El bvudzi rakashama rinogona kuoma uye kutonhora, sezvo zvese zvine chekuita nefiber iyo inogona kunge ichikanganisa. Izvo zvakakosha kupa chikafu uye kupfava vhudzi nezvigadzirwa zvinobatsira kuti zvioneke zviri nani. Kuti vhudzi rive nekupenya tinofanirwa kuwedzera mazai emazai kumask. Izai rinobatsira kuwana kupenya kwakawanda mune fiber bvudzi. Kune rimwe divi, tinogona kusanganisa zai rezai ne yogati, nekuti iyo yogati ine hutano zvakanyanya kune vhudzi uye inobatsira kuti irambe iine hydration. Uye zvakare, izvo zvinhu zviviri zvinowanikwa zviri nyore mukicheni uye zvinosanganisa zviri nyore kuisa pabvudzi.
Mask yevhudzi rine mavara
Vhudzi rakapendwa rine dambudziko guru rekuti rakaoma uye dzimwe nguva rinokuvara. Iyo mafuta omuorivhi chinhu chikuru uye zvakare zvisikwa zvakasikwa hazviite zvekukweva ruvara. Iwe unogona kuwedzera mamwe mazai emazai kuti usimudze bvudzi uye riite kuti riite serinopenya uye rakatsetseka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » 6 masiki ebvudzi eichi chitubu
Maitiro matsva kubva kuPurificación García wezhizha